Qalabka Shaqada Qabow ee Birta ah, Qalabka Shaqada kulul ee Birta - Histar
Qalabka shaqada ee QABOW waxay u kala baxaan shan kooxood: adkaanshaha biyaha, qallajinta saliidda, adkeynta hawo hawo dhexdhexaad ah, chromium kaarboon-sare leh iyo shoog iska caabin ah. Sida magacooda ka muuqata, birtan ayaa loo adeegsadaa codsiyada heerkulka hooseeya ama dhexdhexaadka ah. Aadka u xidho iska caabin sabab u ah mugga sare ee carbides gudaha
Xayawaanada Xawaaraha Sare ayaa loo magacaabay si ay u muujiyaan awooddooda inay iska caabiyaan jilicsanaanta heerkulka sare sidaas darteedna ay u ilaalinayaan jarista fiiqan marka goosgoosyada ay culus yihiin oo xawaaruhu sarreeyaan. Iyagu waa kuwa aad u sarreeya ee dhammaan noocyada birta aaladda.
WAAN SOO KABAN KARNAA BARNAAMIJYADA AS
QAADKA BARKA, QALABKA BATARKA, DULMIGA, xaashiyaha birta, MILKIISA FILAN BARKA SEMI-DHAMMAADKA AH OO DHAMMAAD AH.
Shanghai Histar Birta Co., Ltd waxaa la aasaasay 2003, Waxay diiradda saareysay iibka qalabka iyo bir caaryo ah. Si dhakhso leh ayey u koraysay iyadoo lagu saleynayo noocyo kala duwan oo qalab iyo biraha caaryada ah, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo adeeg ka wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah, aaladda sumadda "HISTAR" iyo qalabka caaryada ayaa lagu iibiyay in ka badan 40 dal iyo gobollada dibedda, waxayna siinayaan adeegyo tayo leh in ka badan 100 shirkado dibadeed ah.
1. Awood u lahaanshaha keydinta darajooyin iyo cabbirro kaladuwan
Awood u lahaanshaha si loo habeeyo kaydka sida loo dalbado
3.Awood u lahaanshaha bixinta darajooyin / cabirro gaar ah sida loo dalbado.
Macluumaadka waqtiga dhabta ah ee wax soo saarka.
5.Soo bandhig kaydinta keydka.
Hubsiimo iyo soo-gaadhsiin waqtigeedii gaadhay
Laqabsashada habka loo adeegsado / loo isticmaalo
Bixi taageero farsamo
Tct Wareegga Mashiinka Loogu Talagalay Birta, Mashiinka Mashiinka Wareegga Wareega ah, Tct Wareegga Wareegga Sawirka, Hss M35 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Hss M2 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Qalabka Shaqada kulul ee Birta Lagu Dhejiyo,